I-China Isakhiwo seMortar eyongezelelekileyo yesitashi u-Ether ukuqina kunye nokugcinwa kwamanzi kuMvelisi kunye noMthengisi | Longou
Ukwakha iMortar eyongezelelekileyo yesitashi kunye nokugcinwa kwaManzi
1.Istarch ether luhlobo lomgubo ocolekileyo omhlophe owenziwe ngezityalo zendalo ngokuguqula, ukusabela okuphezulu kwe-etherification, kunye nokomisa ukutshiza. Ayisebenzi’t ziqulathe nayiphi na iplasticizer okanye isinyibilikisi sendalo.
2. I-ether yesitashi inokuphucula ukusebenza kunye nokwandisa ukusebenza komdaka owomileyo ngokuguqula ubukhulu kunye ne-rheology yeedaka ezahlukileyo ezomileyo ezisekwe kwisamente kunye ne-gypsum.
Isitashi ether zingasetyenziswa ngokubambisana neselulosi kaEtere (HPMC, HEMC, HEC, MC) ukufezekisa umsebenzi ongcono ukuqina, ukuqhekeka ukumelana, ukumelana sag, ukuthambisa ebalaseleyo, kunye nokuphucula ukusebenza. Ukongeza inani elithile le-ether yesitashi kunokunciphisa inani lokusetyenziswa kwe-cellulose ether, iindleko zingagcinwa kunye nokwakhiwa komsebenzi kunokuphuculwa.
1. Isitashi etherluhlobo lomgubo ocolekileyo omhlophe owenziwe ngezityalo zendalo ngokuguqula, ukusabela okuphezulu, kunye nokomisa ukutshiza. Ayisebenzi’t ziqulathe nayiphi na iplasticizer okanye isinyibilikisi sendalo.
2. Isitashi ether ingayiphucula intsebenzo kwaye isebenze ukusebenza yodaka owomileyo ngokuguqula ubukhulu kunye ne-rheology yeedaka ezahlukileyo ezomileyo ezisekwe kwisamente kunye ne-gypsum.
Ukwakha uMdaka wokuDibanisa iStarch Picture Show
Igama Isitatshi Ether
CAS Hayi. 9049-76-7
Ikhowudi ye-HS 35 0510 0000
Inkangeleko Umgubo ocolekileyo omhlophe
Ukunyibilika Ukunyibilika emanzini abandayo
Viscosity （5% isisombululo zolwelo que 400-12,000mPa.s
Ixabiso le-pH I-9.0-11.0 (3.75% isisombululo esinobuchule)
Umxholo wokufuma ≤5%
Ukuhambelana Ukuhambelana ngokugqwesileyo nolunye udibaniso lweekhemikhali olusetyenziswe kwizinto zokwakha
Iphakheji 25kg / ingxowa
Iindidi ezahlukeneyo (zethayile yodongwe, izinto zamatye) yokuncamathelisa
Ene Ubuchule udaka umhombiso kwaye Ukutyabeka udaka
Iindidi ezahlukeneyo (zesamente, i-gypsum, i-ash calcium esekwe) ngaphakathi nangaphandle I-wall putty umgubo
Ukukwazi ukukhawuleza ngokukhawuleza, i-viscosity ephakathi, ukugcinwa kwamanzi inokuphuculwa xa isetyenziswa ngokubambisana neselulose ether.
Isilinganiselo esisezantsi kakhulu sinokufikelela kwisiphumo esihle.
Ukuphucula i ukumelana nesanti yodaka, Ukuncamathela kwethayile yodongwe
➢ Ukuba nezinto zokuthambisa ezibalaseleyo; ukuphucula ngempumeleloukusebenza kodaka, i-putty, i-gypsum, kunye nezinye izinto, kuqinisekisa ukusebenza kakuhle.
Gcina iphakheji yoqobo kwindawo eyomileyo nepholileyo. Emva kokukhupha imveliso, kufuneka ivalwe ngokuqinileyo ngokukhawuleza ukuze kuthintelwe ukufuma kungene;
Egqithileyo Ukutshiza i-Cellulose Fibre yokuNgqinisisa kunye nokuNcitshiswa kwesandi
Okulandelayo: I-Polycarboxylate Superplasticizer Powder I-PCE yokunciphisa amanzi iarhente yokugungxula